I-50 YEENWELE EZIKHANYAYO EZILUNGILEYO KUNYE NEENWELE ZAMADODA (ISIKHOKELO SE-2021) - IINWELE ZAMADODA
Eyona Iinwele Zamadoda I-50 yeeNwele eziKhanyayo eziLungileyo zaMadoda
Ngaba ujonga indlela yokwenza isitayile seenwele zamadoda ezigobileyo? Izinwele ezisikiweyo kunokuba nzima ukuzilawula, kodwa ezona ndlela zilungileyo zokulungisa iinwele zamadoda zingakunika inkangeleko eyahlukileyo ezinye iintlobo zeenwele okanye uburhabaxa abunako. Ngapha koko, iinwele ezijijekileyo kunye neenwele ezinamacala anokuzibona sele zintle kwaye zipholile xa zisikiwe kwaye zibhalwe kakuhle. Kodwa ngamathuba angenasiphelo wesitayile, umceli mngeni kubafana abane curly kunye iinwele ezibhabhazelayo ufumana iinwele ezifanelekileyo zabo imilo yobuso , ubude obufunwayo, kunye nesimbo sobuqu.
Apha ngezantsi, siza kukubonisa iinwele zamadoda zamva nje zokulungisa iinwele ukuze ufumane ngoku. Nokuba ufuna iinwele ezinde ezigobileyo ngevolumu kunye nentshukumo okanye ii-curls ezimfutshane ngenkangeleko elula, yokugcina isezantsi, ezi ndlela ziya kujonga. Ukuba awuqinisekanga ukuba wenzani ngeenwele zakho ezijijekileyo, jonga isikhokelo sethu esibanzi kwizinwele eziphezulu zamadoda aneenwele ezigobileyo.
1Iinwele zeeNwele eziGobileyo zamadoda
1.1Iinwele ezisikiweyo ezingaphantsi
1.2Izinwele eziQinisekisiweyo ziyafiphala
1.3Ukuphela okuphezulu okuPhezulu okuphezulu
MbiniIzitayile zeenwele eziFutshane zaMadoda
2.1Ukudibanisa okuQokelelweyo ngaphezulu
3Iinwele eziPhakathi eziPhakathi
4Izinwele ezinde eziLusu
5Iimveliso eziPhambili zeNwele zaMadoda eziPhambili
5.1I-Shampoo kunye neConditioner yeeNwele eziGobileyo
5.2Iimveliso eziHambayo zeNwele eziGobileyo
5.3Izinwele zokomisa iinwele kunye neProtectant Heat
6Izitayile eziPholileyo zaMadoda zokuzama
6.1Ukucheba okuphezulu kweBald + Ukunyuka phezulu + kweenwele eziMfutshane eziQineneyo
6.2Ubude obuphakathi Iinwele ezirhabaxa + iindevu
6.3Ukuphela kwetempile + kulayini ophezulu + ukugoba okude okugogekileyo
6.4Ukugqabhuka kweMadehaw ngee curls
6.5Ii-curls ezinde zoMyalezo
6.6I-Curly ephezulu ye-Curly + Fade + ye-Edge Up
6.7Mfutshane Curly Afro Fade
6.8I-Curly ephezulu ephezulu + yokuPhela okuPhantsi
6.9Amacandelo amafutshane eTapered + Winge Fringe
6.10Amacala achetyiweyo + Umgca oPhezulu + kwiinwele eziGobileyo
6.11Iifreyilithi ezibunjiweyo + eziPhakamileyo eziPhakamileyo + zeendevu
6.12I-Curly ephezulu + yoLusu luphele + Icandelo + iindevu ezipheleleyo
6.13Ukulahla okuPhakamileyo okuphezulu + kweMilo ePhakamileyo +
6.14Iinwele ezinde eziBhulashiweyo eziMva kweNwele + eziPhelileyo
6.15I-Messy Curls + yoLusu oluPhelileyo
6.16Ukuphela kweCurly Undercut Fade
6.17Ubude obuLingeneyo beNwele + iindevu
6.18I-Mid Fade + Imilo ePhakamileyo + yeenwele eziFutshane eziManzi
6.19I-Curly ephezulu ePhakathi + esecaleni eFaded + kwiindevu
6.20Umda omde weWavy + iTaper Fade
Iinwele zeeNwele eziGobileyo zamadoda
Ayizizo zonke iinwele zeenwele ezigobileyo ezenziwe ngokulinganayo, ke oku kusikwa kunye nezimbo zahlulwe ngokwamacandelo kuxhomekeke kubude beenwele zakho. Umzekelo, iinwele ezinde ezibekiweyo zihlala zilula ukuzenza kuba isitayile seenwele zakho sinokudiliza kwaye silungelelanise izitshixo zakho.
Kwelinye icala, abafana abaneenwele ezimfutshane banokukhetha ukusika iinwele zabo ukuphelisa ii-curls zabo okanye ukusebenzisa i pomade eyomeleleyo okanye imveliso ye-wax yeenwele ukugcina ukujonga kwayo yonke imini.
Ngapha koko, uya kufuna ukuqaphela ezinye izinto ezinje ngobungqongqo beenwele zakho kunye nemilo yobuso ukuze uqiniseke ukuba iinwele zakho ziphakamisa izitshixo zakho ezintle kunye nezakhelo zobuso bakho. Okokugqibela, nangona iinwele ezi-wavy ngokucacileyo zahlukile kunee-curls, uninzi lweekhonsepthi ezifanayo ziyasebenza.
Ukusuka kwi-undercut curly evukelayo ukuya kwiklasikhi kunye nolawulo olucekeceke lwasemva, siyathembisa ukuba uyayithanda enye yezi ndlela zezinwele zala maxesha zamadoda aneenwele ezigobileyo.
Iinwele ezisikiweyo ezingaphantsi
I-curcut undercut intle ngokuguquguquka kwayo. Njengengxenye yamacala amafutshane athandwayo, ubude obude obuphezulu, i-curly yeenwele ezisongelayo lukhetho olucengayo olwenza umahluko omkhulu kwimbonakalo yobudoda.
Ngasemva nangamacala eenwele zakho ezi-buzzed ezimfutshane ezimfutshane kunye neziqhiki, iinwele ezigobileyo ngaphezulu kwentloko yakho ziyakhululwa ukongeza ivolumu kunye nokuphakama. Ngokulula enye yezona zinwele zipholileyo, ngaphantsi inokudityaniswa nalo naliphi na inani lesitayile, uburhabaxa, kunye neentlobo zeenwele zembonakalo entle yanamhlanje.
Esinye isibonelelo kukuba iinwele ezijijayo ziba lula ukuzilawula kolu hlobo, njengoko uninzi lwazo luchetyiwe lususwa emacaleni nasemva. Ukuba awukho ekubhaleni iinwele zakho, ukushiya nje ii-curls zakho zendalo kunye nobumdaka kunokubonakala kufanelekile ngenxa yolwakhiwo lwesitayile.
Ngokuchaseneyo, ukongeza ukuphakama kunye nobuhle nge-pomade kudala i-hairstyle efanelekileyo yomsebenzi kunye nemicimbi esesikweni.
Inkqubo ye- iinwele ezisikiweyo ziyaphela kufana nokuhamba ngaphantsi, kodwa ngumahluko omncinci. Kubaqalayo, zombini zibonelela ngonwele olusezantsi olungafuni mva kunye namacala entloko yakho ukuba yenziwe isitayile. Nangona kunjalo, umahluko ophambili kukuba i-undercut ngokubanzi isikwa iphakame kwaye bonke ubude obude ngelixa ukuphela kancinci kuhamba ixesha elide ukuya phezulu.
Ukongeza, abafana banokukhetha phakathi kweentlobo ezahlukeneyo zokuphela-ezantsi, eziphakathi, eziphakamileyo, ukuhla okanye ulusu. Oku kuyakumisela apho iphela iqala khona kunye nendlela eza kunqunyulwa ngayo.
iintlobo zeebraids zamadoda
Umzekelo, unokufuna ukufiphala okuphantsi ngee-curls ngenkangeleko yolondolozo ngakumbi.
Kolunye uhambo oluya kwindawo yokucheba iinwele, unokukhetha ukuphela okuphezulu ngeenwele zakho ezisongekileyo.
Ngeentlobo ezininzi ezahlukeneyo ze-taper fade haircuts, ungenza ngokwezifiso ukusika kwakho nangayiphi na indlela ofuna ngayo. Ekugqibeleni, ukuphela okuphelileyo kuguquka kakhulu kwaye kudityaniswa kakuhle ngeendevu kunye nobume obahlukeneyo bobuso.
Ukuphela okuphezulu okuPhezulu okuphezulu
Ukuphela okuphezulu okuphezulu okuphezulu kubalulekile ukuba kuqatshelwe njengokupholile iinwele zamadoda amnyama . Uninzi lwabafana abamnyama abaneenwele ezijijekileyo zinee-curls eziqinileyo ezenza ukuba kube nzima ukuba nesitayile. Nangona kunjalo, nje ukuba baqalise ukukhula ngaphandle kweenwele zabo zekinky, ii-curls ziyakhulula kwaye zivumele ukuba zifumane oku kujongeka.
Ukuphela okuphezulu okuphezulu ngee-curls kunokwahluka okuninzi. Umzekelo, abanye abantu abamnyama bathanda ukwenza isitayile sexesha elide ekugqibeleni, ngelixa abanye bekhetha into esondeleyo kwi-curly afro emfutshane. Nokuba yeyiphi na uhlobo oluthandayo, ukuxuba okuphezulu okuphezulu kunye neenwele ezigobileyo lolona khetho lubalaseleyo.
Izitayile zeenwele eziMfutshane zaMadoda
Nazi iinwele ezimfutshane ezigobileyo zamadoda zokufumana lo nyaka! Isuka e ikama ngaphezulu kwi-fringe ukuya kwi-quiff, uya kuzithanda ezi ndlela!
Ukudibanisa okuQokelelweyo ngaphezulu
Ngokwesiko, sicinga ikama phezu komntu onenwele ezithe nkqo, ezingqindilili njengezicocekileyo, iinwele zodidi. Kodwa loo mfanekiso awuthethi ukuba ikama egobileyo ngaphezulu ayisebenzi okanye ijongeka ishushu. Ngevolumu kunye nokuthungwa kweenwele zakho ezishinyeneyo, ikama ngaphezulu okanye icala leenwele lithatha inkangeleko enomdla kunye nendalo.
Ukufumana ikama egobileyo ngaphezulu kwento ebunayo okanye esecaleni, ungacela umchebi wakho ukuba aphele emacaleni nasemva, ngelixa ushiya ubude ngaphezulu ngaphezulu ukuze udibanise necala. Oku kuphelela kwinxalenye kusebenza kakuhle kokubini okugobileyo kunye Iinwele ze wavy kwaye yongeza ubumnandi obumnandi obungenakuthelekiswa nolunye uhlobo.
Abafana abaneenwele ezigobileyo bayayithanda Ikama liphele kuba banokuziqeqesha ngokulula kunye nokuzilungisa iinwele zabo ukuba zahlukane. Ukujonga, yongeza nje unodoli wokubamba ngokuqinileyo ipomade okanye i-wax yeenwele kunye nekama leenwele zakho ecaleni ecaleni kwento yakho yendalo.
Unokucela nokuba uchebe iinwele kwindawo enzima ukuba ufuna ukugcina ixesha lokuloba kwaye wenze ikama yakho egobileyo ngaphezulu.
Umphetho we-wavy yinto engathandekiyo, iinwele ezintsha zamadoda aneenwele ezijijekileyo. Uphawu lokwahlulahlula iinwele ezinomphetho ziinwele ezinde ngaphambili kwentloko, ezenza amaza ebunzi. Umphetho we-wavy unokubhalwa kunye nokuhonjiswa ngeemveliso zeenwele ezikhanyayo zendalo.
Abafana banokuthi batshayele iinwele zabo ezimfutshane ze-wavy kwicala elingaphandle. mousse okanye ijeli ukwenza uluhlu lweembonakalo. Ubuninzi bokuthungwa, bhetele. Umphetho we-wavy uphelele emadodeni anee-curls ezichaziweyo, kodwa ikwasebenza kumaza amnandi.
I-curiff quiff yanamhlanje yinguqulelo yeenwele zamadoda zakudala ezonyusa ivolumu yendalo kunye nokuhamba. Eyaziwayo nguJames Dean kwiminyaka ye-1960, i-quiff haircut iyaziwa kwaye i-sexy nokuba i-tousled and messy or brushed back and structured.
Ngokwenza i-quiff ene-curly, iinwele ezinombala, isitayile esinamandla sithatha inkangeleko ephucukileyo. Isarifu ingasikwa ngeendlela ezininzi. Unokufumana i-taper fade okanye i-undercut kumacala nge-clippers okanye ubuze i-barber yakho ukuba isikwe isikere ukuze ijongeke ixesha elide. Kuba iinwele ezingaphezulu kungenzeka ukuba zibude obuphakathi, amacala amafutshane enza ubuhle obungcono ngenxa yomahluko.
Ukwenza isitayile seenwele esigotyiweyo kungathabatha ixesha, kwaye kubandakanya ukomisa iinwele zakho phezulu nasemva kwaye emva koko ufake imveliso yeenwele zamadoda ukubamba imicu endaweni.
Iinwele ezigobileyo ezisikwe ngasemva zinika indlela elawulwayo kunye necocekileyo yokulawula iinwele zakho ezigobileyo okanye ezirhabaxa. Xa zidityaniswe ne-undercut okanye i-fade emacaleni, iinwele ezihlikiweyo ziyindlela efanelekileyo yokuthambisa amaza akho kunye nokwenza isitayile somgangatho wokusebenza kunye nemicimbi esesikweni.
ukulahla kuphele kunye nee-curls
Ukufumana iinwele ezisebenza ngokubuyela umva, cela i-barber yakho ukuba iphele emacaleni, unciphise iinwele zakho ngaphezulu, kwaye ungeze kwezinye iindlela zokwenza ii-curls zakho kube lula ukuzilawula. Xa ubhala isitayile esibuyileyo, uya kufuna ukusebenzisa ukubambelela okuqinileyo, ngakumbi ukuba iinwele zakho azilawuleki. Unokuyifaka ngeminwe nangezandla, emva koko usebenze ngemveliso ngekama.
Ukuba iinwele ezimfutshane ayisosimbo sakho, ke uya kubathanda obu bude bubukekayo obuphakathi kunye neenwele ezinde ezisikiweyo. Ngelixa iinwele eziphothiweyo eziphakathi zinokuba yingxaki ngakumbi ukuzigcina, ezi ndlela ziyenza ngokwenene inkqubo yokukhulisa iinwele zakho kufanelekile.
Iinwele eziphothiweyo eziphakathi ubude zilungile ukuba ufuna iinwele ezingabandakanyi ii-clippers okanye zithintele kubude beenwele zakho. Olu jongo lukhululekile, lutsaliwe emva kwaye luhamba ngokukhululekileyo, njengoko isitayile senzelwe ukubonisa ubude kunye noburhabaxa beenwele zakho.
Ukucheba ngokufanelekileyo izitayile zobude obuphakathi, i-barber yakho iya kunciphisa iinwele zakho ngezikere, unciphise ezinye zee-curls kwaye ungeze kwimaleko embalwa yolwakhiwo.
Kuba isitayile senzelwe ukuba sendalo kwaye sivumele intshukumo, yonke into oyifunayo kukuthambisa iinwele zakho njenge-wax yokubamba ukukhanya okanye ipomade ukuthintela i-frizz kunye nokuphambuka. Unokukhetha ukutsala izitshixo zakho umva kwaye uzibophelele okanye wenze iban yendoda.
Iinwele ezijijekileyo zinethamsanqa kuba nangaphandle kokucheba, iinwele zazo zisabonakala zihle. Ngamanye amaxesha, abafana abaneenwele ezinde ezibukhali babonakala ngathi bayakulibala oko kwaye bajolise kuphela kumthwalo wokulawula kunye nokuhombisa ii-curls zabo. Ngapha koko, iinwele ezinde zokujika iinwele zihamba ziqinile kulo nyaka njengoko izitayile ezintsha zijikela kubude obude, obumbala.
Ukunxiba iinwele ezinde eziqaqambileyo kakuhle, kufuneka ukhulise iinwele zakho kwaye uvumele ii-curls kunye namaza zihamba ngokwendalo. I-shampoo efanelekileyo kunye ne-conditioner inokukunceda kwinkqubo, ukugcina i-scalp yakho kunye neenwele zifakwe i-moisturized and hydrated. Ukurhoxa okwenziwa ngamanye amaxesha kuya kususa iziphelo kunye nokukhuthaza ukukhula okuqhubekayo kweenwele.
Akukho nto ingako ifunwayo kwisitayile seenwele ezinde ezisikiweyo. Uninzi lwabafana lukhetha ukufaka i-wax yeenwele engasindi, udongwe okanye imveliso ye-pomade ukunciphisa i-frizz kunye nokugcina iinwele zithambile kwaye zigcwele ubume.
Ekugqibeleni, iinwele zokugqibela zihamba ngokukhululekileyo ngendlela engagungqiyo kodwa enomdla yokunxiba iinwele zakho. Nokuba uneenwele ezixineneyo, ezixineneyo okanye iinwele ezimdaka ezi-wavy, oku kujongeka kuyakubonisa ubume bakho bendalo kwaye ikunike inketho yokwenza isitayile seenwele ezininzi, kubandakanya nehipster man bun.
Iimveliso eziPhambili zeNwele zaMadoda eziPhambili
Ukufumana indlela yokwenza isitayile seenwele zamadoda kunokuba ngumceli mngeni ngokwawo. Nje ukuba uyazi inkqubo efanelekileyo yokuthambisa iinwele zakho, ukufumana ilungelo Iimveliso zeenwele ezisukiweyo ukugcina ii-curls zakho phantsi kolawulo linyathelo elilandelayo.
I-Shampoo kunye neConditioner yeeNwele eziGobileyo
Ukufumana eyona shampu ilungileyo kunye nesilungisi kubafana abaneenwele ezigobileyo kubaluleke kakhulu. I-shampoo engalunganga inokumisa iinwele kwaye ibangele i-frizz, kodwa iimveliso ezinamanani aphezulu zihambisa amanzi kwaye zithambise isikhumba sakho neenwele ukukhuthaza ukukhula okunempilo.
Izimvo eziyi-3,690 Iimveliso zeBrickell zaMadoda zemihla ngemihla zoQiniso lweShampu yamadoda, eyeNdalo kunye neOrganic equkethe iMint kunye neTi yoMthi weoyile yokuThoba i-Scalp eyomileyo neyirhawuzelelayo, iSulphate yasimahla kunye neParaben Simahla, 8 Ounce,
Isebenza njani: Le shampoo yamadoda ihambisa amandla, ...
Ngapha koko, imeko elungileyo iya kwenza iinwele zakho zithambe, zibe mnandi kwaye zibe mpuluswa, zibenze lula isitayile. Ukutyala imali kwi-shampoo elungileyo yamadoda kunye ne-conditioner yeenwele ezigobileyo kubalulekile kukhathalelo olufanelekileyo kunye ne-hydration.
Iingxelo ze-2,887 IArtNaturals iArgan yeoyile yokuCoca iinwele- (16 Fl Oz / 473ml) -Sulphate yasimahla-Unyango lweenwele ezonakalisiweyo nezomileyo- kuzo zonke iintlobo zeenwele-ezikhuselekileyo kwizinwele eziphathwayo
IFOMU YOKUBUYISELWA KWISIMO SANGAPHAMBILI: Ayifani neemeko ezininzi zokulungisa ...
Iimveliso eziHambayo zeNwele eziGobileyo
Eyona pomade ilungileyo, i-wax kunye nekhrimu yeenwele ezigotyiweyo zinika amandla okuthambisa nokulawula iinwele zakho imini yonke, ngelixa ubonelela ngobume obugqibeleleyo kwinkangeleko yakho oyifunayo. Olunye usiko kunye nezitayile zibukeka zilungile ngokugqitywa okuqaqambileyo, ngelixa ezinye zifuna ukugqitywa kwendalo, ke ngoko khetha iimveliso zeenwele zakho ngononophelo. Khawukhumbule nje ukuba ukhilimu weenwele okhanyayo okanye udongwe uya kugcina izitshixo zakho ezinde ezibukhali zijongeka zihluziwe kwaye zingaqhelekanga, ngaphandle kokuzisindisela.
4.344 Izinto ezithethwe ngabantu I-Cream Natural Matte Cream, esisiseko, emhlophe, Cream Soda ethambileyo, 4.25 Oz
Kwakhona, soloko usebenzisa iimveliso zesitayile kwiinwele ezifumileyo. Gwema ukusebenzisa imveliso kwizinwele ezomileyo, kwaye uhlala uqala ngetawuli eyomileyo, izitshixo ezimanzi kancinci. Oku kunceda ukukhusela i-frizz kwaye kwenza ukuba isitayile silula kamva kwinkqubo.
Izinwele zokomisa iinwele kunye neProtectant Heat
Abafana abaneenwele ezijijekileyo kufuneka baphephe ubushushu obuninzi. Ngelixa ungafuna ukusebenzisa i-straightener yeenwele okanye isomisi seenwele, ezi zixhobo ze-styling zinokuzonakalisa iinwele zakho kwaye zonakalise ii-curls zakho ngokumisa iinwele zakho ezigobileyo.
Intengiso Iingxelo ze-32,688 I-HSI YOBUGCISA I-Argan yoMkhuseli woBushushu beoyile | Khusela ukuya kuthi ga kwi-450º F ukusuka kwi-Flat Irons kunye ne-Hot Blow Dry | Isulphate Simahla, ithintela ukonakaliswa kunye nophuko | Yenziwe eMelika | 8 Ounce, ukuPakisha ngoMeyi kuyahluka
UMKHUSELEKI WENKONZO OYINTLOKO: Khusela iinwele kubushushu ...
IKHEFU-KUMGAQO-NKQUBO: Oku kukhanya kubushushu ...
YENZELWA NGOKUQHELEKILEYO EMelika: Ukuqinisekisa ukuba ufumana ...
$ 15.55 Jonga iAmazon
Ukuba ukhetha ukusebenzisa isomisi esivuthayo ukunceda ukugcina iinwele zakho zisendaweni yonke, yenza oko kubushushu obuphantsi ukunqanda ukomisa imitya yakho kunye neefollic ngaphandle. Qhoboshela isomisi kwisomisi sakho ukuze usasaze ubushushu kwaye unciphise umonakalo.
Intengiso 5.207 Izinto ezithethwe ngabantu I-Conair INFINITIPRO 1875 Watt Ion yokukhetha iinwele, iRainbow Chrome igqibile, ubungakanani obupheleleyo
I-Ionic Hair Dryer: Le Styler ineonic ...
Ukukhawuleza kunye nokuMisa okuMandla: Kuxhotyiswe ngamandla ...
Iimpawu ezizodwa: Le isomisi igalelo kubandakanya ...
Iidola ezingama-30.59 Jonga iAmazon
Ukuba uneenwele ezithe nkqo kwaye ufuna ukufumana iinwele ezigobileyo, jonga isikhokelo sethu esipheleleyo Ukulungiswa kwenyathelo nenyathelo lokwenza ii-curls.
Izitayile eziPholileyo zaMadoda zokuzama
Iinwele zamadoda ezigobileyo zenzelwe ukubonisa ii-curls zakho ezi-sexy ngaphandle kokufaka umgudu omkhulu. Nokuba iinwele zakho zibonakala kunzima ukuzenza mbuna ngamanye amaxesha, khumbula ukuba neenwele zakho zendalo kunye namaza anokusebenza njengengxelo yefashoni.
Ukufunda ukulawula iinwele zamadoda ezisongiweyo konke malunga nokufumana ukusika, izitayile kunye neemveliso ezifanelekileyo ukukhulisa kunye nokulawula iinwele zakho!
Ukucheba okuphezulu kweBald + Ukunyuka phezulu + kweenwele eziMfutshane eziQineneyo
Ubude obuphakathi Iinwele ezirhabaxa + iindevu
Ukuphela kwetempile + kulayini ophezulu + ukugoba okude okugogekileyo
Ukugqabhuka kweMadehaw ngee curls
Ii-curls ezide zeMessy
I-Curly ephezulu ye-Curly + Fade + ye-Edge Up
Mfutshane Curly Afro Fade
I-Curly ephezulu ephezulu + yokuPhela okuPhantsi
Amacandelo amafutshane eTapered + Winge Fringe
Amacala achetyiweyo + Umgca oPhezulu + kwiinwele eziGobileyo
Iifreyilithi ezibunjiweyo + eziPhakamileyo eziPhakamileyo + zeendevu
I-Curly ephezulu + yoLusu luphele + Icandelo + iindevu ezipheleleyo
Ukulahla okuPhakamileyo okuphezulu + kweMilo ePhakamileyo +
Iinwele ezinde eziBhulashiweyo eziMva kweNwele + eziPhelileyo
I-Messy Curls + yoLusu oluPhelileyo
Ukuphela kweCurly Undercut Fade
ukuchetywa kweenwele phakathi kwamadoda
Ubude obuLingeneyo beNwele + iindevu
I-Mid Fade + Imilo ePhakamileyo + yeenwele eziFutshane eziManzi
I-Curly ephezulu ePhakathi + esecaleni eFaded + kwiindevu
Umda omde weWavy + iTaper Fade
imibono ye tattoo esifubeni kumadoda
yintoni enkulu yam 3